Festival Tamaga Midôla : Misongadina ireo ekipa vaventy -
AccueilSongandinaFestival Tamaga Midôla : Misongadina ireo ekipa vaventy
Festival Tamaga Midôla : Misongadina ireo ekipa vaventy
Niditra tamin’ny andro fahefatra ny « Festival Tamaga Midôla » omaly. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina eny amin’ny tora-pasik’i Toamasina. Araka ny efa notaterina teto amin’ny gazety, taranjam-pifaninanana efatra: beach soccer, beach volley, beach hand, ary beach rugby no hiadiana amin’izany. Ny vola azon’ny mpikarakara mandritra ity hetsika ity kosa hatolotra manokana ho fanampiana ny Hopitaly Be-n’i Toamasina. Marihina fa mpiara-miasa akaiky ny Vondrona RLM Communication… Beach soccer Tafita i Mahajanga sy Melaky. Mazava ny lalana ho an’i Mahajanga, Melaky sy Toliara ary Analanjirofo. Anisan’ireo ekipa valo voalohany tafakatra hiatrika ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fifaninanana beach soccer izy ireo. Hotanterahina anio, araka izany ireo lalao ampahefa-dalana eo amin’ity taranjam-pifaninanana iray mandrafitra ny “Festival Tamaga Midôla”. Mitana ny lohany amin’ny filaharana ankapobeny eo amin’ny vondrona “A” i Mahajanga, izay mbola tsy resy mihitsy tamin’ireo lalao natrehiny. Mitana ny laharana faharoa kosa i Toamasina, mpampiantrano, arahin’i Toliara eo amin’ny laharana fahatelo, ary mitana ny laharana fahefatra farany kosa i Mananjary. Tsy tafita fa raraka avy hatrany i Sainte-Marie. Marihina fa mbola tsy nahita fandresena mihitsy ity ekipa farany. Eo amin’ny vondrona “B” indray, mitarika amin’ny filaharana i Melaky, arahin’i Morondava eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo i Analanjirofo….Marihina fa ekipa tsy nampoizina tamin’ity indray mitoraka ity i Melaky.
Manjakazaka ny ekipan’ny Stef’Auto. Niditra an-tsehatra omaly kosa ny teo amin’ny taranja beach volley. Ekipa miisa folo no indray hiady ny lohany eo amin’ny “Festival Tamaga Midôla”. Avy hatrany dia lalao maro no notanterahina teo amin’ny fifanintsanana tamin’iny omaly iny. Anisan’ny ekipa manjakazaka, ary efa tafita sahady hiatrika ny dingana manaraka ny Stef’auto, izay manana ekipa roa. Samy nahazo fandresena indroa avy mantsy ny Stef’Auto I sy ny Stef’Auto II. Ho an’iry voalohany, nandresy ny ASVBM tamin’ny seta 2 noho 0 izy ireo, ary toraka izany koa ny mbola nandavoany ny Falco. Ny Stef’Auto II indray nandresy ny BAVB tamin’ny seta 2 noho 0 ihany koa, ary toraka izany ny nanilihany ny ASVBM. Niady avokoa ny fihaonana teo amin’ireo ekipa mpandray anjara, ary saika nampiseho ny fahaiza-manaony izy ireo. Saingy, hita ho nanatombo tamin’ny traikefa ry zareo ekipan’ny mpampiantrano, toa ny Stef’Auto, izay toa ny nanao fanazaran-tena nanoloana ireo mpifanandrina taminy.
Beach rugby Afaka ny TFMA, Tam, UASC ary TFA Niaka-tsehatra teo amin’ny “Festival Tamaga Midôla” ihany koa ny teo amin’ny beach rugby. Tsy nisy alaharo alaharo fa avy hatrany dia nikatroka ny lalao ireo ekipa valo mandray anjara amin’izany. Nihaona avokoa ireo ekipa efatra mandrafitra ny vondrona “A” sy “B”. Tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana taorian’ny fifanintsanana mivantana ny TFMA sy UASC ary ny TFA sy ny TAM, ny sabotsy 6 oktobra izao. Teo amin’ny vondrona “A”, mitovy ny isa azon’ny TFA sy UASC, satria samy nandresy an’i Toamasina sy Matador izy ireo. Avy eo, nanao ady sahala ireto ekipa roa tafita amin’ny manasa-dalana ireto. Izany hoe raraka avy hatrany ry zareo mpampiantrano sy Matador. Toraka izany koa ny teo amin’ny vondrona “B”, samy nandresy ny XV Family sy ny Uscar ny Tam sy TFMA, ary nanao ady sahala, ka mitovy isa ireto ekipa farany ireto. Hangotraka, araka izany, ny fihaonana eo amin’ny lalao manasa-dalana, satria samy tsy hanaiky fa hiady hiatrika ny famaranana.
Nisongadina i Toamasina sy Toliara Teo amin’ny beach handball, izay taranja fahefatra mandrafitra ny “Festival Tamaga Midôla”, nampiseho ny heriny sy ny fahaiza-manaony i Toamasina sy Toliara. Marihina fa ekipa efatra no mifaninana miady ny lohany eo amin’ity taranjam-pifaninanana lalaovina amina torapasika ity. Noho izany, nivoaka mpandresy teo amin’ny fihaonana voalohany amin’ny fifanintsanana i Toamasina rehefa nandresy ny Cospn Mahajanga tamin’ny “tirs au but”, 5 noho 4. Nisaraka tamin’ny isa 1 noho 1 mantsy ny roa tonta teo amin’ny fe-potoana ara-dalàna. Toa ny nanao fanazaran-tena kosa indray i Toliara nandritra ny fihaonany tamin’ny Oniversiten’Antananarivo. Tafavoaka mpandresy teo amin’ny fihaonana voalohany tamin’ny isa mazava, 2 noho 0, ny ekipan’Atsimo Andrefana. Mbola mitohy anio kosa ny fifanintsanana eo amin’ity taranja beach handball ity, ary izay manana isa ambony no hiatrika ny lalao famaranana.